दक्षिण कोरियाले अफगानिस्तानका आफ्ना नियोगहरुमा सघाउने अफगानी नागरिकहरुलाई कोरिया ल्यायो ! – Korea Pati
दक्षिण कोरियाले अफगानिस्तानका आफ्ना नियोगहरुमा सघाउने अफगानी नागरिकहरुलाई कोरिया ल्यायो !
August 26, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on दक्षिण कोरियाले अफगानिस्तानका आफ्ना नियोगहरुमा सघाउने अफगानी नागरिकहरुलाई कोरिया ल्यायो !
दक्षिण कोरियाले अ’फगानस्तानमा रहँदा आफ्नो गतिबिधीमा सहयोग गर्ने तथा त्यहाँको आफ्ना अफिसमा काम गर्ने अ’फगानस्तानका नागरिकहरुलाई कोरिया ल्याउने भएको छ।
बिहिवार सम्म कोरियाले कुल ३ सय ९१ जना अ’फगानीहरुलाई कोरिया ल्याइसक्ने भएको छ। अमेरिका र त्यसका सहयोगी देशहरुका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा स’घाउने अफगानीहरुलाई केहि दिन अघि स’त्ता क’ब्जा गरेका ता’लिवा’नीहरुले दु’ख दिन सक्ने भन्दै विभिन्न देशहरुले उनिहरुलाई आफ्नो देश ल’गिरहेका छन।
उनिहरु कोरिया आएपछि सरकारले सन्चालन गरिरहेको छुङछनबुक्दो प्रदेशको जिनछनमा रहेको से’ल्टरमा लगिनेछ। गत बर्ष ची’नको बु’हानमा को’रो’ना फै’लि’एपछी त्यहाँ रहेका हजारौं कोरियन नागरिकहरुलाई पनि उ’ध्दा’र गरी यसै से’ल्ट’रमा राखिएको थियो।
“विहिवार सम्ममा करिब ३ सय ८० जना अफगानीहरु इन्छन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्नेछन।” कोरियाका विदेश मन्त्रालयका एक उ’च्च अ’धिकारीले भनेका छन। विदेश मन्त्रालयले पछि यो संख्या सं’सोधन गर्दै ३ सय ९१ जना हुने बताइसकेको छ।